गोरखामा भदौमै दशै धुमधामसंग मनाइयो । किन मानाइयाे भदाैमा ? - Maxon Khabar
Home / News / गोरखामा भदौमै दशै धुमधामसंग मनाइयो । किन मानाइयाे भदाैमा ?
गोरखामा भदौमै दशै धुमधामसंग मनाइयो । किन मानाइयाे भदाैमा ?
२०७६ भदै २३
गोरखा जिल्लामा भदौ महिनामाै बिजयादशाी धुमधामसंग मनाइएकाे छ भन्ने सुन्दा
तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, गोरखाका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले भने दशैँ मनाइसके । त्यो पनि कुनै परिबन्दमा परेर होइन, मन्दिरमा घटस्थापना गरेर, दैनिक दुर्गा भवानीको पूजा गरेर अनि दशमीको दिन टीका र जमरा लगाएर ।
१ महिना अघि नै दशैँ किन मनाइयो ?
हिन्दूहरु सबैजसो संस्कार पात्रोका आधारमा गर्छन अर्थात पञ्चाङग निर्माणको आधार सूर्यलगायतको ग्रहलाई आधार मानेर गरिन्छ । जसलाई समग्रमा खगोलविज्ञान भनिन्छ ।